यी हुन् १२ वर्षीया मीना जसको भारतमा डुंगा दुर्घटना हुदा अकालमै मृत्यु, भारतमै भयो अन्तेष्टी – Jagaran Nepal
यी हुन् १२ वर्षीया मीना जसको भारतमा डुंगा दुर्घटना हुदा अकालमै मृत्यु, भारतमै भयो अन्तेष्टी
Jagaran Nepal शुक्रबार, कार्तिक १२, २०७८
महाकाली नदीमा बुधबार डुंगा प’ल्टिँ’दा मृत्यु भएकी १२ वर्षीया मीना साउँदको भारतै अन्तेष्टी गरिएको छ। शिवनाथ गाउँपालिका १ घर भएका चक्रसिंह साउँदकी छोरी मीनाको महाकाली डुं’गा प’ल्टिँ’दा मृत्यु भएको थियो।
महाकाली नदीमा पानी बहाव बढी भएकाले नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था नहुँदा मीनाको आज भारतमै आफन्तले अन्तेष्टी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताए।
यो पनि, सोलु करिडोरको काम अन्तिम चरण
सोलुखुम्बु, ११ कात्तिक (रासस) : सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम चाँडै सम्पन्न हुने भएको छ । आठौँ पटक म्याद थप भएको आयोजनाको काम अबको दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख जर्नादन गौतमले बताउनुभयो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवाका स्थानीयवासीले मुआब्जा बझ्न तयार भएसँगै चाँडै काम सम्पन्न हुने सम्भावना बढेको उहाँको भनाइ छ । एक वर्षमा तीन पटकसम्म म्याद थप गरिएको भन्दै प्रमुख गौतमले अब चाँडै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उदयपुरको मरुवा र सोलुखुम्बुको पत्तालेका प्रभावित स्थानीय जग्गाधनीको अवरोधका कारण आयोजनाको काम रोकिएको थियो । जिल्लामा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थलगत अनुगमनदेखि जग्गाधनीसँगको बारम्बार संवादपछि अवरोध हटेको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशविक्रम शाहीले बताउनुभयो । अवरोध हटेसँगै पत्ताले क्षेत्रमा बाँकी रहेको दुई किलोमिटर तार तान्ने काम सम्पन्न भएको प्रजिअ शाहीको भनाइ छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ९० किलोमिटर दूरीमध्ये अब १८ किलोमिटर तार तान्ने काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको गौरवको आयोजना हुनका साथै जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जानबाट रोक्न सक्दो प्रयास गरी जिल्लाको समस्या समाधान गरेको सोलुखुम्बुका सङ््घीय सांसद हेमकुमार राई (शुरवीर)ले बताउनुभयो । जम्मा ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा २९८ वटा सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार अब बाँकी चार वटा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा निर्माण हुनेछ ।
ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने अडान राखेका त्यहाँका स्थानीयवासीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिनेसहितको सूचना सार्वजनिक भए पनि बुझ्न आउनुको सट्टा अदालतमा जाँदा विलम्ब भएको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो ।
सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रभावित स्थानीयवासी जग्गाधनीलाई असोज २२ गतेसम्म मुआब्जा बुझ्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार गतिरोध हटेपछि काम गर्ने वतावरण सिर्जना भए पनि धानबाली उठाउनका लागि समय मागेकाले तत्काल काम स्थगित गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । “अब धानबाली उठाउने बेला भयो”, प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “तिहारपछि लगतै काम सुरु भएर ४५ दिनमा सकिन्छ ।” अदालतले असोज २२ गतेभित्र मुआब्जा बुझ्न नआएको खण्डमा काम सुरु गर्न सक्ने गरी आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि स्थानीय जग्गाधनी मुआब्जा बुझ्न तयार भएका हुन् ।
अदालतको आदेशपछि मरुवा क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी काम सुरु गरिएको थियो । चार वटा टावर निर्माण गर्नेस्थलमा भने धानबाली भएकाले काम स्थगित गरी बाली उठाउने समय मागिएको थियो । सन् २०१६ सेप्टेम्बर २५ मा ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको काम सुरु गरेको भए पनि सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख कटानसम्बन्धी नीतिगत जटिलता तथा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा करिब १५ करोड खर्च
आयोजनाको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब रु १५ करोड मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वापत खर्च भएको छ । टावर निर्माण हुने स्थलको जग्गा करिडोरको नाममा आउने हुँदा सो वापत मुआब्जा दिने र प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ ।
तीन जिल्लामा पर्ने आयोजनाले सोलुखुम्बुमा ७७ कित्ताको सबै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । उदयपुरमा १०२ कित्तामध्ये ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने ओखलढुङ्गाको ८२१ कित्ताको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । ओखलढुङ्गामा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको छ तर मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा केकति खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न बाँकी रहेको प्रमुख गौतमले बताउँनुभयो । आयोजना सम्पन्न गर्दा करिब रु ४० करोड क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जामा खर्च हुने आयोजनाको अनुमान रहेको छ ।
हातमा लगाइएको सुनले ल्याउँछ दुर्भाग्य, थाहा पाउनुस् सुनसँग जोडिएका १३ रोचक कुरा
आफ्नाे श्रीमानलाई छोडेर फेसबुकमा लब परेको के’टा स’ङ्ग भा’ग्नाले मुम्बईमा यसरी बे’चिन पु’गिन बिमला
जापान जान्छु भनेर मख्ख नपरे हुन्छ, जापानमा नेपालीहरुले भोग्ने पिडा र दुख कम्ता छैनन् भिडियो हेर्नुहोस
सारङ्गी बजाउँदै जोगीको भेषमा २२ वर्षपछि श्रीमान् भिख माग्न घरमै आइपुगे, विधवा बनेर बसेकी श्रीमतीको होस उड्यो
फेसबुकमा लभ परेर बिहे गर्न ठिक्क परेकी केटी देखेर केटा भए बेहोस, गरे देह त्यागको प्रयास यस्तो छ अचम्मको कारण
नेपालमा पाइने तर नेपालीले राम्रोसंग नचिनेको यो अमुल्य औषधि, जस्ले महिनावारी गडबडी, क्यान्सर र अन्य यस्ता ठुला रोग निको पार्छ
निधार हेरेर नै थाहा पाउन सकिन्छ मानिसको स्वभाव जिद्दी छ कि बुद्धिमान छ भनेर
संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ?
शास्त्र भन्छ गर्भवती महिलाले कोठामा यी चिज राख्दा जन्मिन्छ वुद्धिमान र तेज दिमागको बच्चा
भुटेकाे मकै मधुमेह राेगीका लागि अचुक औषधि, यस्ता छन् फाइदाहरु
यी पाँच भाइकी एक्ली पत्नी, यस्तो छ रात विताउने नियम
कुकुरले खुला ठाउँमा से क्स गर्नुको कारण यस्तो पो रहेछ
नियमित से’क्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? देखिन्छ शरीरमा यस्तो लक्षण
श्रीमानसंग सुतेकी थिईन्, आधारातमा कसैले शरीर खेलायो, श्रीमान सम्झेर आँखा खोल्दा होसै उड्यो……!
नुहाउँदा पिसाब छाड्नुहुन्छ?अवस्य पढ्नुहोस यो जानकारी
युवतीको यौन सम्बन्ध छ/छैन पत्ता लगाउने यस्ता छन् पाँच तरीका